သမီးဖွဈသူမှာ အလိုမတူပဲ သားမယားပွုကငျြ့ခံရသဖွငျ့ မိခငျဖွဈသူမှ ရဲစခနျး၌ အမှုဖှငျ့တိုငျကွား - ALINNMYAY
Home MM-NEWS သမီးဖွဈသူမှာ အလိုမတူပဲ သားမယားပွုကငျြ့ခံရသဖွငျ့ မိခငျဖွဈသူမှ ရဲစခနျး၌ အမှုဖှငျ့တိုငျကွား
ဧပွီ (၂၆) AlinnMyay(အလငျးမွေ)
ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး၊ ညောငျလေးပငျမွို့နယျ၊ တျောဝိကြေးရှာတှငျ တရားလို၏ သမီးဖွဈသူ မ…..(၂၀)နှဈ ကို အလိုမတူပဲ သားမယားပွုကငျြ့မှုဖွငျ့ ၂၀၂ဝ ဧပွီ ၂၅ရကျနကေ့ မိခငျဖွဈသူမှ တရားလိုလုပျပွီး လာရောကျ အမှုဖှငျ့တိုငျကွားခဲ့ကွောငျး ညောငျလေးပငျမွို့မရဲစခနျးမှသိရသညျ။
ဖွဈစဉျမှာ တရားလို မိခငျနှငျ့ အတူနေ သမီးဖွဈသူ မ…. မှာ ဗိုကျပူနသေဖွငျ့ မသင်ျကာ၍ (၂၅.၄.၂၀၂၀)ရကျနေ့ က ညောငျလေးပငျပွညျသူ့ဆေးရုံသို့ သှား ရောကျပွသခဲ့ရာ သမီးဖွဈသူ မ…. တှငျ ကိုယျဝနျ(၃)လရှိနကွေောငျး သိရှိရသဖွငျ့ မေးမွနျးရာ ၂၀၁၉ ဒီဇငျဘာ၈ရကျက မိဘမြား ပဲနှုတျသှားနစေဉျ နအေိမျ၌ တဈဦးတညျးကနျြနခေဲ့ရာ နအေိမျခွရေငျးတှငျ နထေိုငျသူ အောငျကိုလတျမှ ၎င်းငျးအားခဈြကွိုကျကွောငျးပွောဆိုပွီး ပါးစပျအားလကျဖွငျ့ပိတျ၍ သားမယားအဖွဈ (၁)ကွိမျပွုကငျြ့ခဲ့ ကွောငျး၊ မိဘမြားအားပွနျပွော ပါက သတျပဈမညျဟုပွောသဖွငျ့ကွောကျရှံ့၍ မပွောခဲ့ကွောငျး၊ ထို့နညျးအတူ နအေိမျတှငျ မိဘမြား မရှိခိုကျ သားမယား အဖွဈ(၅)ကွိမျခနျ့ ထပျမံပွုကငျြ့ခဲ့ ကွောငျး၊ ပွောပွသိရှိရသဖွငျ့ မိခငျဖွဈသူမှ တရားလို ပွုလုပျပွီး အရေးယူပေးပါရနျ လာ‌ရောကျတိုငျတနျး‌ သောကွောငျ့ အောငျကိုလတျသညျ တရားလို၏ သမီးဖွဈသူ မ…. အား မိဘမြားမရှိခိုကျ အလိုမတူပဲ သားမယားအဖွဈပွုကငျြ့ခဲ့ကွောငျး ရဲစဈဆေးခကျြအရသိရသညျ။
ဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ အလိုမတူပဲ သားမယားပွုကငျြ့သူ အောငျကိုလတျအား ညောငျလေးပငျမွို့မရဲစခနျးမှ (ပ)၉၅/၂၀၂၀၊ ရာဇသတျကွီး ပုဒျမ ၃၇၆ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့အရေးယူဆောငျရှကျထားရှိကွောငျးသိရသညျ။
သမီးဖြစ်သူမှာ အလိုမတူပဲ သားမယားပြုကျင့်ခံရသဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူမှ ရဲစခန်း၌ အမှုဖွင့်တိုင်ကြား
ဧပြီ (၂၆) AlinnMyay(အလင်းမြေ)
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ တော်ဝိကျေးရွာတွင် တရားလို၏ သမီးဖြစ်သူ မ….. (၂၀)နှစ် ကို အလိုမတူပဲ သားမယားပြုကျင့်မှုဖြင့် ၂၀၂ဝ ဧပြီ ၂၅ရက်နေ့က မိခင်ဖြစ်သူမှ တရားလိုလုပ်ပြီး လာရောက် အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်း ညောင်လေးပင်မြို့မရဲစခန်းမှသိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ တရားလို မိခင်နှင့် အတူနေ သမီးဖြစ်သူ မ…. မှာ ဗိုက်ပူနေသဖြင့် မသင်္ကာ၍ (၂၅.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့ က ညောင်လေးပင်ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ သွား ရောက်ပြသခဲ့ရာ သမီးဖြစ်သူ မ…. တွင် ကိုယ်ဝန်(၃)လရှိနေကြောင်း သိရှိရသဖြင့် မေးမြန်းရာ ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ၈ရက်က မိဘများ ပဲနှုတ်သွားနေစဉ် နေအိမ်၌ တစ်ဦးတည်းကျန်နေခဲ့ရာ နေအိမ်ခြေရင်းတွင် နေထိုင်သူ အောင်ကိုလတ်မှ ၎င်းအားချစ်ကြိုက်ကြောင်းပြောဆိုပြီး ပါးစပ်အားလက်ဖြင့်ပိတ်၍ သားမယားအဖြစ် (၁)ကြိမ်ပြုကျင့်ခဲ့ ကြောင်း၊ မိဘများအားပြန်ပြော ပါက သတ်ပစ်မည်ဟုပြောသဖြင့်ကြောက်ရွံ့၍ မပြောခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နည်းအတူ နေအိမ်တွင် မိဘများ မရှိခိုက် သားမယား အဖြစ်(၅)ကြိမ်ခန့် ထပ်မံပြုကျင့်ခဲ့ ကြောင်း၊ ပြောပြသိရှိရသဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူမှ တရားလို ပြုလုပ်ပြီး အရေးယူပေးပါရန် လာ‌ရောက်တိုင်တန်း‌ သောကြောင့် အောင်ကိုလတ်သည် တရားလို၏ သမီးဖြစ်သူ မ…. အား မိဘများမရှိခိုက် အလိုမတူပဲ သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း ရဲစစ်ဆေးချက်အရသိရသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အလိုမတူပဲ သားမယားပြုကျင့်သူ အောင်ကိုလတ်အား ညောင်လေးပင်မြို့မရဲစခန်းမှ (ပ)၉၅/၂၀၂၀၊ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၇၆ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားရှိကြောင်းသိရသည်။
Previous articleကိုဗဈ စောငျ့ကွညျ့ခံရသူမြား၏ နှာခေါငျး၊ အာခေါငျတို့ဖတျ နမူနာမြား ရနျကုနျသို့ ပို့ဆောငျရနျ သညျဆောငျလာသညျ့ WHO ပိုငျ ယာဉျ တိုကျခိုကျခံရ
Next articleမိုးရှာ၍ စလဈဖွဈကာ ကားမှ ဆိုငျကယျကို ဝငျရောကျတိုကျမိပွီး ဆိုငျကယျမောငျးသူသဆေုံး
ငှကေပျြသိနျး ၂၃၉၄၀ တနျဖိုးရှိ စိတျကွှရူးသှပျဆေးပွားမြား ဖမျးဆီးရမိ